ब्वाँसोजस्तो एमाले, साँढेजस्तो माओवादी ! -
ब्वाँसोजस्तो एमाले, साँढेजस्तो माओवादी !
मोहन तिम्सिना ३० आश्विन २०७४, सोमबार ०७:३२ 645 पटक हेरिएको
यसपालिको दशैंलाई ‘राजनीतिक सरप्राईज’ दशैं भन्नुपर्ने भयो । चाडवाडमय माहोलमा अप्रत्यासित घटना भए । पहिले कम्युनिष्ट नेताहरुले बाम/कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणको घोषणा गरे । लगत्तै अर्कोथरीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरे । परिदृश्य निक्कै रोचक देखियो । ‘उग्रवामपन्थी’, ‘दक्षिणपन्थी’ र ‘नयाँ शक्ति’ समेत अचानक जस्तो गरी एक ठाउँमा उभिए । अर्कोतिर ‘पहिचान पक्षधर’ र ‘बिरोधी’ पनि एकैठाउँमा देखिए । आपसमा कटाक्ष गर्नेहरुका मुखबाट प्रशंसाका बचन सुनिए । यसले आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धालाई फरक मोड दिने संकेत त गरेको छ साथै राजनीतिमा केहि बदलावको संकेत पनि गरेको छ ।
लामो प्रयासपछि भरखरै संघीय गणतन्त्रसहितको संबिधान बनेको छ । अब कुनै न कुनै तरिकाले राजनीतिक कोर्समा बदलाव जरुरी नै थियो । बदलावको पहिलो संकेतको रुपमा बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो परिघटना देखा परेको छ । त्यसैले यो परिघटनाप्रति नकारात्मक भइहाल्न जरुरी छैन । आशा गरौं, गठबन्धनहरु दिगो बन्ने छन् । पार्टीहरुको संख्या घट्ने छ । कमसेकम कुनै न कुनै शक्तिले बहुमतको सरकार बनाउनेछ र पाँच बर्ष राजनीतिक स्थिरता दिने छ । सायद धेरै नेपालीको आशा हो यो ।
राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त अवस्थामा यति हुनु पनि ठुलो कुरा हो । तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु नै समाधान भने होइन । यो त ‘नहुनु मामा भन्दा पर्ने मामा जाति’ भने जस्तै मात्र हो । अर्को अर्थमा यो त यात्राको पहिलो पाइला हो । त्यसपछि आउँछ सुशासन, समन्याय र समृद्धिको कुरा । मानव समाजलाई सभ्य, समुन्नत र प्रसन्न बनाउने कुरा । यो यात्राले चाही गति लिन्छ कि लिँदैन ? सोच्नु पर्ने विषय चाहिँ यो हो ।
बाम गठबन्धनमा दुईवटा स्कुलिङ छन् । एउटा जबज स्कुलिङ, अर्को प्रचण्डपथ स्कुलिङ । यी दुई स्कुलिङले दुईखाले गुणधर्म निर्माण गरेको छ । जबज स्कुलिङले ‘ब्वाँसाहरु’ उत्पादन गरेको छ । प्रचण्डपथ स्कुलिङले ‘साँढेहरु’ उत्पादन गरेको छ
दुवै गठबन्धनका नेताहरु ‘नचिनेका जेठाजु’ होइनन् । त्यसैले यिनले भोली के गर्लान भनेर आजै अनुमान गर्न कठिन त छैन । तर भोली गल्ति नै गर्छन् भनेर अहिल्यै दोष लगाइ हाल्न पनि सान्दर्भिक हुन्न । त्यसैले राजनीतिक ध्रुवीकरणप्रति हाललाई राग र द्वेष मुक्त साक्षी हुनु नै श्रेयकर हुने छ ।
बाम गठबन्धनमा दुईवटा स्कुलिङ छन् । एउटा जबज स्कुलिङ, अर्को प्रचण्डपथ स्कुलिङ । यी दुई स्कुलिङले दुईखाले गुणधर्म निर्माण गरेको छ । जबज स्कुलिङले ‘ब्वाँसाहरु’ उत्पादन गरेको छ । प्रचण्डपथ स्कुलिङले ‘साँढेहरु’ उत्पादन गरेको छ । ब्वाँसोले जतिसुकै बलियो साँढेलाई पनि सुम्सुम्याएर आन्द्राभुँडी झिक्ने सामर्थ राख्दछ । त्यस्तै साँढेले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने दजनौं ब्वाँसाहरुलाई तह लगाउन सक्छ । तर, बलको हिसाबले तुच्छ हुनु ब्वाँसाको कमजोरी हो । बल हुँदाहुँदै भङजाहा हुनु साँढेको कमजोरी हो ।
गुणधर्मका हिसाबले एमाले र माओवादी ठीक यस्तै छन् । एमाले ०४६ यताको चुनाव र सरकारको अनुभवले ब्वाँसो जस्तो छट्टु भई सकेको छ । माओवादी भरखरै चुनाव र सरकारको अभ्यासमा आएको र जनयुद्धको दम्भमै रहेकोले अझै हान्नेसाँढे जस्तो छ । कहिलेकाँही एमालेले आन्द्राभुँडी झिकिसक्दा पनि माओवादीले थाहा नपाउन सक्छ । कहिलेकाहीँ माओवादीका भङजाहा सिङ अनाहकमा एमालेतिर सोझिन सक्छन् । त्यसैले यी दुई समूहमा पार्टी एकता त परै जाओस् गठबन्धनको निरन्तरता पनि निकै ठूलो कुरा हो ।
यी दुवै चरित्र मिल्न सके भने अस्थायी नै सही निकै ठूलो शक्ति बन्न भने सक्छ । तर, यही पहलले नै यिनीहरुलाई सम्पूर्णतः मिलाइहाल्छ भन्न सकिन्न । समयको प्रवाहले दुवैलाई रुपान्तरण गर्ला र क्रमश यिनीहरु अन्तरघुलित हुँदै जालान् । अर्थात पटकौं पटकका यस्ता पहलले मात्र यो बाम गठबन्धन एउटै पार्टीमा रुपान्तरित होला । समय अन्तराल लिएर भए पनि यदि यस्तो भयो भने प्रगति भएको नै मान्नुपर्छ ।
यता दायाँ गठबन्धनको अर्को रोचक पक्ष छ । यो गठबन्धनमा पहिलो कांग्रेस, दोश्रो राप्रपाहरु र तेश्रोमा मधेसवादी/पहिचानवादीहरु छन् । गठबन्धन बनाएर चुनाव जित्ने मात्र होइन, यिनीहरुले पनि पार्टी एकता सम्मकै उद्देश्य राखेको बताएका छन् ।